စီးပွားရေးသတင်းတို Archives | Page 11 of 30 | Frontier Myanmar
တရုတ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရင်းမြစ်သစ်များ ရှာဖွေနေ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးရေနံထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည့် တရုတ်အမျိုးသား ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း(CNPC) ၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုက မြန်မာနှင့် တရုတ် ဆက်သွယ်ထားသည့် ပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရင်းမြစ်သစ်များကို ရှာဖွေလျက်ရှိသည်ဟု ချိုင်းနားဒေလီသတင်းစာက ရေးသားထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေဝူးအင်တာနေရှင်နယ်၏ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်များမှ သွယ်တန်းယူထားသော ပိုက်လိုင်းများတွင် ထပ်မံဖြည့်တင်းရန်အတွက် နောက်ထပ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို CNPC Southeast.
အူရီဒူးမြန်မာက အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် အတည်ပြု ခန့်အပ်
အူရီဒူးမြန်မာ၏ ယာယီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူနေသည့် Mr. Vikram Sinha အား အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အသစ်အဖြစ် အတည်ပြု ခန့်အပ်လိုက်ပြီဟု အူရီဒူးမြန်မာက ပြောကြားသည်။ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင် လုပ်သက်အနှစ် ၂၀ ခန့် အတွေ့အကြုံရှိသည့် ၎င်းသည် အူရီဒူးမြန်မာတွင် ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လက စတင်ပြီး အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် ယာယီတာဝန်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်.
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ချင်း စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန် ပြင်ဆင်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်တော်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်များတွင် ချင်း စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန် ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ဒေသခံ ပုဂ္ဂလိလုပ်ငန်းရှင်များ ပြင်ဆင်နေကြသည်ဟု ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ် ((UMFCCI) က ပြောကြားသည်။ “ရခိုင်ဒေသက ချင်းစိုက်ပျိုးဖို့အတွက် ရေခံမြေခံအနေအထား အရမ်းကောင်းတယ်။ အထွက်နှုန်းကောင်းမှာ သေချာတယ်။ ဈေးကွက်အနေနဲ့လည်း အမေရိကန်၊ နယ်သာလန်၊ ဂျာမနီတို့ကို.